नियोजित रुपमा फसाइएका एसएसपी, एसपी र डिएसपीको कारबाही फुकुवा
काठमाडौं । सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा नियोजित रुपमा फसाइएका नेपाल प्रहरीका ३ अधिकृतको कारबाही फुकुवा भएको छ । २०७५ वैशाख १६ देखि निलम्वनमा परेका एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल र डीए ...
साईराम डेण्टलमा विदेशी पर्यटक अाकर्षित, एण्ड्रि बने सद्भावना दुत
चितवन । चितवनको रत्ननगरलाई डेण्टल टुरिजमको रुपमा घोषण गरेसँगै यहाँ दाँतको उपचार गर्न आउने पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ । विगत एक दशकदेखि दन्त उपचारमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मा ...
केरुङबाट भित्रिएको पाँच किलो सुन बरामद, शंकाको घेरामा रसुवाका डिएसपी
काठमाडौं । केरुङ नाकाबाट भित्रिएको पाँच किलो सुन सहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले रसुवाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बसमा सवार रसुवाका शोबहादुर तामाङले बोकेर ...
पोखरामा स्याङयोङ गाडीको नयाँ सोरुम
२०७५ असोज १६ गते
पोखरा । स्याङयोङ गाडीको नेपालका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक आइएमएस मोटर्सले पोखरामा आफ्नो नयाँ सोरुमको स्थापना गरेको छ । पोखरास्थित बुद्धचोकमा स्थापना भएको नयाँ शोरुमबाट प्रदेश ४ का उपभोक्ताह ...
यौन शोषक धर्मगुरूलाई सफाई , उपचार गर्न आउने महिलालाई विभिन्न बहानामा बलात्कार गर्दथे
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले धार्मिक आवरणमा महिलाहरुलाई यौन शोषण गर्ने अवतारी लामा रिम्पोर्छे छुल्ठिम दोर्जे योन्तान (योन्जन) टुल्कु लामालाई जवरजस्ती करणी मुद्धामा सफाई दिएको छ ...
निर्मला पन्त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आएरै छाड्ने :सांसद बस्नेत
कास्की । संघीय संसद्का सांसद महेश बस्नेतले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आएरै छाड्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले आज आयोजन ...
काठमाडौं । चाडपर्वको अबसरमा महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी बसन्त लामाले पत्रकार सम्मेलन गरेर शान्ति सुरक्षा मजबुद भएको दाबी गरेकै रात काठमाडौंका आधा दर्जन स्थान ...
आईएमएस ग्रुपले भित्र्यायो डिजेआईका ड्रोन
काठमाडौं । सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता आइएमएस ग्रुपले आफ्नो व्यवसायलाई एक पछि अर्को गर्दै विस्तार गरेको छ । आइएमएस ग्रुपले ड्रोन व्यवसायमा पनि हात हालेको छ । आइएमएस ग्रुप विश्व विजारमा ड ...
सरकारी पसलले नै यसरी गर्छन् ठगी
काठमाडौं । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई मध्य नजर गर्दै चिनी उत्पादकहरुले सस्तो मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने बताइरहँदा सर्वसाधारणको सुविधाका लागि भन्दै सञ्चालन गरिएको सरकारी पसलले भने प्रतिकिलो ११ र ...
प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिले तरंग
काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढेको विश्लेषण गर्दै राजनीतिबाट समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन् । भदौ २४ गते जङ्गी अड्डामा पदभार सम्हा ...
प्रहरीलाई ठुलो सफलता, १३ बर्ष अगाडि पाँच जनाको हत्या गर्ने अभियुक्त सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रहरीले १३ बर्ष अगाडि नेपालगञ्जका सुनचाँदी व्यवसायी हेमकार परिवारको हत्याका मुख्य अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएको छ । २०६२ फागनु २३ गते हेमाकर परिवारका सदस्य गुलामदेवी हेमकार, जगदेव ह ...
काठमाडौँ । नक्कली कागजपत्र बनाएर बुढानिलकण्ठको ४० आना जग्गा अर्कै व्यक्तिलाई नामसारी गर्ने मालपोत कार्यालय चावहिलका प्रमुख उपसचिव कमलप्रसाद तिमिल्सेना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त ग ...
काठमाडौं। देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रीहरूको सचिवालयमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । केही साताअघि मन्त्रालयभित्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव ...
बलात्कारको आरोप लागेका पूर्वएमालेका वडाध्यक्षलाई एसपीको संरक्षण !
२०७५ असोज १३ गते
दमौली । नवलपरासी डेढगाउँकी एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष झकबहादुर कुमाललाई राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले जोगाएको खुलासा भएको छ । तत्कालीन एमाल ...
कहाँ–कहाँ शुरु भयो आजबाट सुपथ मूल्य पसल ? (मूल्य सूची सहित)
काठमाडौं । सरकारले नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमी, तिहार र छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको नेतृत्व गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभ ...
सर्वोच्चले चापागाईंको कागजात माग्दा ढकाललाई झट्का, विमा समिति कब्जा गर्न अदालतमा चलखेल
काठमाडौैं । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको डिजाइनमा विमा समितिको अध्यक्ष बनेका चिरञ्जीवी चापागाईंको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सबै कागजात पेश गर्न आदेश दिएसँगै ढकालले अदालतमा चलखेल शुरु गरेका ...
पोखरा। पोखरास्थित पुम्दीभुम्दी कोदीकी १० वर्षीया बालिका श्रेया बिकलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी ओम रानाले ह ...
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग औपचारिक भेट गरेका छन् । न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रम्पसँग औपचारिक भेट गरेका हुन । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ ...
चिकित्सकको नाटकिय अपहरणले प्रहरीलाई रातभर हैरानी , अन्तत:आफै प्रहरी फन्दामा
सिराहा। हिजो रातभर अपहरणमा परेका भनिएका एक चिकित्सकका कारण प्रहरीले हैरानी खेप्नु परेको छ । लहानबाट चिकित्सक सुवास बनैता यादवलाई साँझ अज्ञात समूहले अपहरण गरेको भनिएको थियो। तर, उनको सर्लाहीको न ...
निर्मला हत्या प्रकरण: प्रतिवेदन गृहमन्त्रीको हातमा, अभियुक्तबारे प्रतिबेदन मौन
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको छानबिन गर्न गठिन उच्चस्तरीय समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितीका संयोजक सहसचिव हरि ...
ओलीले भनेको आक्रामक अरिंगालभन्दा ‘टेस्टी’ अरिंगालको चर्चा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेको आक्रामक अरिंगालभन्दा धेरै यहाँ ‘टेस्टी’ अरिंगालको चर्चा छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगालजस्तै आक्रामक बन्नू, खनिनू भनिरहँदा य ...
सुन काण्डका १२ जना इन्टरपोलको नोटिसमा
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठनको नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी), काठमाडौंले १४ जनालाई रेड नोटिस जारी गरेको छ । १४ जना मध्ये १२ जना ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति ...
काठमाडौं । एसिड आक्रमणमा परी गम्भीर घाइते भएकी चन्द्रपुर नगरपालिका ६ की १८ वर्षीया सम्झनाकुमारी दासको मृत्यु भएको छ । उनको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा आइतबार राति मृत्यु भएको हो । गत भद ...
तीन एआईजीलाई आईजीपीद्धारा दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
काठमाडौं । डिआईजीबाट एआर्इजीमा बढुवा भएका तीन प्रहरी अधिकृतलाई आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा आईजीपी खनालले उनीहरुलाई ...
कालो सूचीमा परेको गेजुवालाई फेरि बूढीगण्डकी सुम्पीए ओलीले
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनमा कालो सूचीमा परेको एक कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुम्पने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊ ...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक सय वर्ष पुगेका राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई उनकै निवासमा पुगेर शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । उनलाई एकसयौं जन्मदिनको शुभकामना दिन आफन्त, छिमेकी र शुभचिन् ...
पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध सम्भव छ नेपालमा ?
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साइट’ बन्द गराउने भएको छ । मन्त्रालयले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दूरसञ्चार प्राधिकणलाई निर्देशन दिएको छ । अश्लील सामग्रीमा इन्ट ...
प्रधानमन्त्री ओली आज अमेरिका प्रस्थान गर्दै
काठमाडौं । युक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन् । अमेरिकामा हुने राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा भाग लिन ओली शनिबार राति ९ बजेपछि त्यस ...
तीन डिआइजीको एआइजीमा बढुवासंगै पदस्थापना
काठमाडौँ। सरकारले नेपाल प्रहरीका तीन डिआइजीलाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवासंगै पदस्थापना गरेको छ । मन्त्रीपरिशदको हिजोको बैठकले बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा डिआइजी पुष्कर कार्क ...
काठमाडौं । नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेको दुई साता नपुग्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाको इतिहासमा नै पहिलो पटक नयाँ नियम लागू गर्न सर्कुलर जारी गरेका छन् । प्रधानसेनापति थापाले देशभ ...
काठमाडौं । अवैध रुपमा बिक्री गर्न लागिएको चितुवाको छालासहित तीन जनालाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो ( सिआईबी )ले पक्राउ गरेको छ । सिआईबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले असोज ४ गते बौद्ब सिद्धार्थमा ...
काटमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघी आजबाट टिकट बुकिङ गर्ने सम्झौता भएकोमा महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि फिर्ता ...
राँगा भनेर भैंसीको मासु बेच्ने ४ वधशालामा शिलबन्दी
काठमाडौं । सरकारले चार पशुवधशालाको मासु बिक्री बितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारी टोलीले ललितपुरका वधशाला अनुगमन गर्दै न्यूनतम् मापदण्ड पूरा नगरेका ४ वटामा शिलबन्दी गरेको हो । कृषि मन्त्रालय, ...
इनरुवा । मोटरसाइकलमा आएको भारतीय हतियारधारी समुहले सुनसरी जिल्लाको भुटाहामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खुर्सिद आलमको गोली हानी हत्या गरेको छ । भारतबाट मोटरसाइकलमा आएको समूहले भुटाहास्थित ...
काठमाडौं । तारागाँउ रिजेन्सी होटल (ह्यात) को सेयर विक्री गर्दा कमिसन खाएको आरोप लागेका संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी होटलबाट नाफा उठाउन असफल भएका छन् । ह्यात होटलल ...
काठमाडौं । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पक्राउ परी थुनामा रहेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई उच्च अदालत बिराटनगरले प्रमाण नपुगेको भन्दै छाड्न आदेश दिएसँगै सरकारले गठन गरेको बिशेष अ ...
प्रहरीमा आन्तरिक शुद्धिकरण तीब्र ,४ महिनामा ४९५ प्रहरी कारबाहीमा
काठमाडौं। सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी बनेपछि ४ सय ९५ प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छ। सुन तस्करी र या सनम शाक्य हत्याको आरोपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले २ जना एसएसपी, १ एसपी, २ डिएसपी, १ जना र १ ...
दाङमा पेस्तोलसहित बुढा पक्राउ
दाङ। प्रहरीले हतियारसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका-१२ बस्ने २१ वर्षीय जुनकुमार बुढालाई १ थान अवैध होममेड रिभल्वर सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला ...
मोरङ । उच्च अदातल, मोरङले साढे ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनाललाई साधरण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतले एसपी खनाललाई मंगलबार साधारण तारेखमा छोड्ने ...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैँका लागि नयाँ नोट वितरणको तयारी थालेको छ। राष्ट्र बैंकले तीन सरकारी बैङ्कसहित निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सटही सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। निज ...
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले चोरी गर्न प्रयोग गरिएको गाडीसहित चार जना लुटेरालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले चोरीमा प्रयोग गर्ने औजारहरु पनि बरामद गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा मकवानपु ...
काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर दशैंका लागि टिकेट बुकिङ नखोलेका यातायात व्यवसायीहरुले अन्ततः बुकिङ खोल्ने तयारी गरेका छन् । राजधानीबाट जिल्ला बाहिर जानका लागि असोज ५ गतेबाट बुकिङ खुल्ला हुने भएको ...
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोटेश्वर र काँडाघारीका दुई प्रहरी सहायक निरिक्षकसहित सात प्रहरी जवानलाई घुस रकम सहित पक्राउ गरेको घटनाले प्रहरी महानिरिक्षक ( आईजीपी ) सर्वेन्द्र ख ...
अपराधसम्बन्धी दैनिक दुई हजार फोन, १० मिनेटमै प्रहरी घटनास्थलमा
अच्युत रेग्मी/रासस २०७५ भदौ ३१ गते
काठमाडौं । उपत्यकामा कतै डाँका, चोरी, डकैती, दुर्घटनाजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप त भएको छैन ? यदि भएको छ, भने तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस् । घटना भएको पाँचदेखि १० मिनेटमा प्रहरीको टोली घटनास्थलम ...
आइजीपीले देखाएको सक्रियताबाट हत्यारा पक्राउ पर्नेमा निर्मलाको परिवार आशावादी
काठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कापछि गर्ने अपराधीलाई पत्ता लगाउन जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डीएसपी अंगुर जिसीसहित चार प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा ...
निर्मला हत्या प्रकरण : गृहको समिती एक्सनमा,डिएसपीसहित थप ५ प्रहरी निलम्बित
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा बलात्कार पश्चात हत्या गरिएकी अबोध बालिका निर्मला पन्तको हत्यापछि गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै २ जना डिएसपी, २ जना इन्सपेक्टर र एक जना असइ निलम्बनमा परेका छन ...
५० लाख नेपाली रुपैयासहित दुई चिनिया नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । अबैध रुपमा पचास लाख नेपाली रुयैया बोक्दै हिंडेका दुई चिनिया नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले शुक्रवार ज्याठाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।उ ...
काठमाडौं । संसदबाट जनस्वास्थ्य विधेयक पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसँगै अनजानमा वा लापरबाही वा हेलचेक्रयाइ भएर बिरामीको अंगभंग अथवा मृत्यु भए डाक्टरहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन। त्यस ...
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले बलात्कार, हत्या तथा अन्य विभिन्न घटनाका बारेमा संसदमा जानकारी गराएका छन् । आजको संसद बैठकमा अन्य संसदहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिंदै ...
सप्तऋषिको पूजा गरी एक वर्षका लागि मूख्य चाड तीजलाई विदा गर्दै हिन्दू महिलाहरु
काठमाडौं । आज भाद्र शुक्ल पञ्चमीका अर्थात हिन्दू महिलाहरुको मुख्य पर्व तीजको अन्दिम दिन । आज हिन्दू महिलाहरुले महिलाहरुले सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन् । महिलाहरु आज बिहानै नदी, खोला, त ...